राजाले प्रयाेग गर्ने बग्गीका कहानी : कुन बग्गी केका लागि ? « Image Khabar
राजाले प्रयाेग गर्ने बग्गीका कहानी : कुन बग्गी केका लागि ?
२३ मंसिर २०७८, बिहीबार १९:०१
काठमाडौं । राजामहाराजाहरूको इतिहास फगत बखान मात्र नभएर संग्रहालय पनि हो । नेपाली सेनाले आफ्नो क्याभलरीमा संरक्षण गरी राखेका बग्गीहरूले नेपाली इतिहासको वैभव चिनारी दिन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर, जुद्धशमशेर, भीमशमशेर, चन्द्र शमशेर हुँदै शाह परिवारका राजामहाराजाले समेतगरी २१ बग्गीको उपयोग गरे । बग्गीका आ–आफ्नै विशेषता छन् । राजसंस्थाको अन्त्य भएसँगै सेनाले इतिहासका नासो संरक्षण गरेको छ ।
दशकौं अघि प्रयोगमा ल्याइएका र अहिले थान्को लागेका बग्गीहरूको आफ्नै कथा छ । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले प्रयोग गर्ने गरेको झण्डावालको नामले परिचित बग्गीको बनावट रोचक छ । ब्यारेकमा भए मध्ये यो निक्कै ठूलो आकारमा छ ।
बेलायतबाट ल्याइएको ‘झण्डावाला बग्गी’भित्र शौचालयको समेत प्रबन्ध छ । जंगबहादुरको शासनकालमा राणाहरूको मनोरन्जनका लागि मोटर कोचका रूपमा यसको उपयोग गरिन्थ्यो ।
राजपरिवारको शुभ कार्यहरूमा प्रयोगमा ल्याइने बग्गीको नाम हो कालो सालेबम बग्गी । भीमशमशेरको पालामा यसलाई नेपाल भित्र्याइएको हो ।
कालो सालेबम बग्गी
राजा वीरेन्द्रले प्रयोग गर्ने गरेको स्टेट कोच १ बग्गी भारतको कोलकाताबाट ल्याइएको हो, जुन अन्तिम समय राजा ज्ञानेन्द्र २०५८ सालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्दा प्रयोगमा ल्याइएपछि थन्किएको हो ।
स्टेट कोच १ बग्गी
सन् १९८० मा कोलकाताबाट ल्याइएको अर्को स्टेट कोच २ भने पूर्वरानीहरूका लागि उपयोग हुन्थ्यो । यो दिल्ली झप्पावाल नामले परिचित बग्गी हो । यसको प्रयोग अधिराजकुमार र अधिराजकुमारीको शुभकार्यमा प्रयोग हुने गरेको थियो ।
स्टेट कोच २ बग्गी
पछिल्लो समय पूर्वयुवराज पारस शाहको विवाहपछि यो बग्गी उपयोगविहीन बनेको छ । चार लाल्टिन ल्याण्डुको उपयोग कुटनीतिज्ञका लागि प्रयोग हुन्थ्यो । ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्न आएका कुटनीतिज्ञहरू यो बग्गीको प्रयोग गर्थे ।
निक्कै नै आकर्षक र इतिहास बोकेका यी बग्गीहरूको प्रयोग नेपाली सेनाले औपचारिक समारोहमा गर्ने गरेको छ । आकारमा ठूला बग्गीहरू भने चलाउन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले यतिकै राखिएका छन् ।
बग्गी संरक्षण गरि राखिएको बग्गी ब्यारेज
दशकौंदेखि प्रयोगमा नल्याइए पनि नेपाली सेनाले सरसफाइ र मर्मत सम्भार गरेकाले यसको संरक्षणमा खोट लाउने ठाउँ छैन । यी बग्गीजस्तै अन्य संग्रहालयका सम्पदाको पनि संरक्षण हुन जरुरी छ ।
‘फादर अफ माइन्डफुलनेस’ उपाधि प्राप्त बौद्ध भिक्षु हानको निधन
आइतबार देशभरका अदालतमा बिदा
वालिङ नगरपालिकामा संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार र खानाको व्यवस्था
देशका अधिकांश भागमा बदली, बर्षा र हिमपातको सम्भावना, आइतबार पनि मौसममा सुधार नआउने
काठमाडौं । ‘फादर अफ माइन्डफुलनेस’को रूपमा चिनिएका विश्व प्रसिद्ध भियतनामी बौद्ध भिक्षु थिच न्हाट हानको निधन भएको छ। ९५ वर्षको उमेरमा शनिबार भियतनामको ह्युमा रहेको
खप्तडमा हिउ खेल्ने पर्यटकको घुइँचो
काठमाडौं, माघ ८ । सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीयस्थल खप्तड क्षेत्रमा पुनः हिमपात भएपछि अहिले आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । जिल्लामा कोरोना जोखिम कायमै रहे
सरकारी स्वामित्वका १८ संस्थानहरु संकटमा
काठमाडौं, माघ ८ । यतिबेला अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये २४ संस्थान नाफामा रहँदा १८ संस्थान वित्तीय संकटमा फस्दै गएका छन् । एकाधिकार तोड्दै उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक